Google.cn tany Shina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Desambra 2018 5:11 GMT
Namoaka ny tolotra miaraka amin'ny sehatra vaovao Google.cn amin'ny dikanteny Shinoa ny Google, ilay fitaovam-pikarohana goavana amin'ny aterineto. Teo aloha, mizotra mankany amin'ny http://www.google.com/ig?hl=zh-CN ity sehatra ity, ilay fikarohana amin'ny alàlan'ny Google amin'ny dikanteny Shinoa any Etazonia. Nanivana votoaty sy vohikala maromaro mifanaraka amin'ny governemanta Shinoa sy ny lalànany ity tolotra ity, araka ny loharanom-baovao samihafa (1,2,3).
Natomboka tamin'ny tolotra vitsivitsy fotsiny ihany ny Google.cn. Nanome tolotra vitsivitsy fotsiny izy tao amin'ny pejy fototra toy ny tranonkala sy ny fikarohana sary, ary ny vaovao, tsy nisy ny tolotra mailaka tahaka ny Gmail sy ny Tolotra Fampiantranoana Bilaogy toy ny Blogger. Eo amin'ny bokotra fikarohana, dia misy ireo rohy mampiseho ny tranonkala sy ny sehatra izay voasoratra ao Beijing, Shina ary “Beijing ICP050124″ ny laharana. Raha manao fikarohana miaraka amin'ireo teny manan-danja saropady toy ny hoe 1989 ( fampahafantarana bebe kokoa ao amin'ny Wikipedia ) dia tsy asehon'ny tranonkala ny valim-pikarohana “manohintohina”. Misy ihany koa ny fanambarana amin'ny teny Shinoa eo ambanin'ireo valim-pikarohana, izay midika hoe “Misy ny valim-pikarohana sasany no tsy navoaka araka ny lalàna sy politika eto an-toerana” ( Pikantsary).
Araka ny filazan'ny Sina Tech, nanao fanambarana ampahibemaso ny Google hoe: “Tsy mifanaraka amin'ny politikanay ny fanafoanana ny valim-pikarohana, ary manitsaka ny fitsipikay ny tsy fanomezana vaovao”. Nilaza ihany koa izy ireo fa tsy mikasa ny hanome tolotra mailaka sy ny famahanana bilaogy.
Hoy ny bilaogera Shinoa Cathayan hoe: “Mazava fa tafiditra eo anelanelan'ny idealy sy ny zava-misy ny Google, ka ny antony tsy nanomezany tolotra maro ho an'ireo mpanjifany Shinoa noho izany dia mbola tsy azony antoka izay azon'izy ireo atao.”
Nilaza ny GFans.org, tranonkalan'ny Mpankafy Google ao Shina, hoe “Eny, mahamenatra izany, fa tsy ho an'ny Google”.